Fisarihana « Airtel Mandresy »: tsara vintana ny tany Fort-Dauphin nahazo fiara | NewsMada
Fisarihana « Airtel Mandresy »: tsara vintana ny tany Fort-Dauphin nahazo fiara
Ny faran’ny herinandro teo, natao ny fisarihana fahatelo ny “Airtel Mandresy” teny amin’ny foibeny Alarobia. Ireo mpivarotra « puce » Airtel manerana ny Nosy no mahazo mandray anjara amin’ity lalao ity, ho an’ny faritra Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Toliara, Antsiranana, ary Antananarivo. Loka lehibe nozaraina amin’izany môto scooter sy fiara Renault …, miampy ireo loka maro hafa, toy ny fahitalavitra.
Koa azo lazaina fa tsara vintana ny tany amin’ny faritra atsimo tamin’ny fisarihana farany teo. Tany Ambovombe Androy, nisy nahazo moto scooter , ary tany Fort-Dauphin ny nahazo an’ilay loka lehibe fiara Renault …. Nisy nahazo moto koa tany Ambondromamy, faritanin’i Mahajanga. Lalàn’ny varotra izao, lalàn’ny fifaninanana koa.
Tanjona amin’ity lalao ity ny hanaparitaka hatrany ny tambajotra Airtel manerana ny Nosy, hitomboan’ny olona mampiasa azy. Misy lafiny maro ny amin’ny fampandrosoana ny toekarena, indrindra ny any amin’ny kaominina ambanivohitra, ny tombontsoa azo. Afaka mifandray ireo mpandraharaha anatin’ny fotoana fohy, miainga avy amin’izay fifandraisana izay ny hamaritana fotoana, hifanaovan’ireo mpanangom-bokatra sy ny mpamboly amin’ny alalan’ny finday.